အနုပညာသည် ၄ ဦးအား လုပ်အားပေး သင်တန်းပေး ခြင်းများ ပိတ်ပင်ခြင်းသာဖြစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အနုပညာသည် ၄ ဦးအား လုပ်အားပေး သင်တန်းပေး ခြင်းများ ပိတ်ပင်ခြင်းသာဖြစ်
Posted by toyo on Sep 4, 2010 in News |3comments
မနေ့က RFA သတင်းဌာနမှ “အနုပညာသည်လေးဦးအား ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခွင့်များ ပိတ်ပင်လိုက်သည်” ဟုကိုကျော်သူမှ ပြောကြားသည် ဆိုသည်မှာ မှားယွင်းနေကြောင်း ဦးကျော်သူ၏ face book တွင် ရှင်းပြထားပါသည်။
– မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချဆက်ဆံရေး၊
– ကာယံကံရှင်ကို ညင်သာရိုသေနွေးထွေးစွာဆက်ဆံရေး၊
– တစ်ဖက်လူ၏ဆက်ဆံရေးသည် မချေမငံဆက်ဆံလာပါက ဒေါသ ရှေ့မထားရေး၊
– မိမိတို့အသင်း၏ လုပ်ဆောင်ပေးမှု အတိုင်းအတာကို ကာယကံရှင် တို့ သဘောပေါက်နားလည်မှု ရှိသည်အထိ ပြောဆိုဆက်ဆံရေး၊
– ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး (မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ) ကို မြေ၀ယ်မကျလက်ကိုင်ကျင့်သုံးရေး၊
နအဖခိုင်းတာလုပ်ပြီး ပြည်သူ့ဖက်တော်သားတွေနဲ့ကြတော့ မဆိုင်သလိုနေတဲ့ စစ်အလိုကြ အနုပညာ သမားတွေကို ဝိုင်းကြဉ်ကြပါဗျို့။ မနက်ဖန် ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမှာ လုပ်မဲ့ပွဲကို ညီညီညာညာ ဆန့်ကျင်ကြပါ။ လူကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘဲ စစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ အနစ်နာခံလုပ်နေရတဲ့ ပညာရှင်တွေအတွက် တတပ်တအား ဝိုင်းဝန်းပေးကြပါ။
ဒီနေ့ပဲ စာရေးဆရာ ကိုဝေမှူးသွင်က ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတာကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ကြေငြာထားတယ်လို့ မိုးမခမှာ တင်ထားပါတယ်။
U kyaw san bought 11(A) Inyamyaing Street, Bahan Township ( about 1 million dollors ). It is very expensive. But how can be bought ?